မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်က COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန် အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ရမည်ဟုမှာကြား - Xinhua News Agency
ပြုံယမ်း၊ မေ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းသည် အရေးပေါ်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်စဉ် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ရောဂါ ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရန် အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် မေ ၁၂ ရက်က တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း Korean Central News Agency က သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ကင်က “နိုင်ငံ၏ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အရေးပေါ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးစနစ် အမြင့်ဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်” ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေး အခြေအနေကို စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုလည်း လေ့လာခဲ့ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
အကြောင်းရင်းသေချာ မသိရှိရဘဲ ဖျားနာသူတစ်ဦးကြောင့် ဧပြီနှောင်းပိုင်းမှစ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ပြည်သူ ၃၅၀,၀၀၀ ကျော်မှာ “အချိန်ခဏလေးအတွင်း၌” ဖျားနာခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အနက် အနည်းဆုံး ၁၆၂,၂၀၀ မှာ အပြည့်အဝနာလန်ထူလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မေ ၁၂ ရက် တစ်ရက်တည်းတွင်ပင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း လူပေါင်း ၁၈,၀၀၀ ခန့် ဖျားနာခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် လူ ၆ ဦးသေဆုံးခဲ့သလို ပြည်သူ ၁၈၇,၈၀၀ ကျော်မှာ သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ကာ ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်းနှင့် သေဆုံးများအနက် တစ်ဦးတွင် အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်၏ BA.2 မျိုးကွဲကူးစက်ခံရသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သတင်းက ဖော်ပြထားသည်။
“မြို့တော်ဒေသမှာ ပင်မနေရာအဖြစ် ဖျားနာမှုတွေ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပျံ့နှံ့နေတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ထူထောင်ထားတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးစနစ်မှာ အားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာပါပဲ” ဟု ကင်၏ ပြောကြားချက်အား ကိုးကား၍ သတင်းကဖော်ပြထားသည်။
“ဒါဟာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း အခြေအနေကို ဆောလျင်စွာ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့၊ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး စိန်ခေါ်မှုနဲ့ အထူးတာဝန်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြုံယမ်းမြို့တွင် မေ ၈ ရက်က ရယူခဲ့သော ဖျားနာမှုရှိသူ လူနာများထံမှ နမူနာများတွင် ကူးစက်မြန် အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း တရားဝင်သတင်းအေဂျင်စီက မေ ၁၂ ရက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် မကြာမီ နယ်စပ်များကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကို တားဆီးရန် တင်းကျပ်သောဆောင်ရွက်ချက်များ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မေ ၁၂ ရက်မတိုင်မီအထိ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
PYONGYANG, May 13 (Xinhua) — Kim Jong Un, top leader of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), on Thursday called for quick action to contain the spread of COVID-19, when visiting the state emergency epidemic prevention headquarters, the official Korean Central News Agency reported.
Kim examined the epidemic prevention situation “after the state epidemic prevention work was switched over to the maximum emergency epidemic prevention system,” and learned about the nationwide spread of COVID-19, said the report.
A fever whose cause couldn’t be identified explosively spread nationwide from late April, and more than 350,000 people got fever “inashort span of time” and at least 162,200 of them recovered completely.
“The simultaneous spread of fever with the capital area asacentre shows that there isavulnerable point in the epidemic prevention system we have already established,” Kim was quoted as saying.
The official news agency reported Thursday that samples taken from patients with fever in Pyongyang on Sunday were “consistent with” the virus’ highly transmissible Omicron variant.